ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံ (သို့) ပိုလာဝက်ဝံ
(en: Polar Bear)
ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံ (သို့) ပိုလာဝက်ဝံ (Ursus maritimus) သည် အာတိတ်သမုဒ္ဒရာ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ပင်လယ်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ကုန်းမြေများ ပါဝင်သော အာတိတ်စက်ဝိုင်းတွင် နေထိုင် ကျက်စားလေ့ရှိသော ဝက်ဝံမျိုးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကုန်းနေ အသားစား သတ္တဝါများတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ဝက်ဝံများထဲတွင်လည်း အကြီးဆုံး ဝက်ဝံမျိုး ဖြစ်သည်။ အခြားအစုံစား သတ္တဝါဖြစ်သည် ကိုဒီယပ်ဝက်ဝံမျိုးမှာလည်း ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံများနှင့် အရွယ်အစား အတူတူ ခန့်မျှ ရှိသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသော ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံထီး တစ်ကောင်သည် ၃၅၀ မှ ၆၈၀ ကီလိုဂရမ် (၇⁠၇၀ မှ ၁၅၀၀ ပေါင်) အထိ ရှိတတ်ပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသော ဝင်ရိုးစွန်း ဝက်ဝံအမ မှ အရွယ်အစား တဝက်ခန့်မျှ ရှိတတ်သည်။ ဝက်ဝံညိုများနှင့် အမျိုး အလွန်နီးစပ်သော်လည်း ၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက် ယှက်နွယ်နေသော ဂေဟစနစ်နှင့် ကိုက်ညီအောင် ဆင့်ကဲ ပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါပြီး ဖြစ်သည်။ ဝင်ရိုးစွန်း ဝက်ဝံများ၏ ခန္ဓာကိုယ် သွင်ပြင်မှာ အလွန်အေးသော အပူချိန်ကို ခံနိုင်ရန်၊ နှင်း၊ ရေခဲနှင့် ရေပြင်ပေါ်တွင် လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ရန်၊ သူတို့၏ အစားအစာဖြစ်သော ဖျံတို့ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ရန် စသည်တို့နှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါပြီး ဖြစ်သည်။ ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံ အများစုမှာ ကုန်းပေါ်တွင် မွေးဖွားသော်လည်း ၎င်းတို့၏ အချိန်များစွာကို ရေထဲတွင် ကုန်ဆုံးလေ့ရှိကြသည်။ သိပ္ပံအမည်မှာ ပင်လယ်ဝက်ဝံဟု အမည်ရပြီး ဤအချက်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။. ဝင်ရိုးစွန်း ဝက်ဝံများသည် ဖျံများကို ပင်လယ်အတွင်းရှိ ရေခဲတုံးပေါ်မှ ဖမ်းဆီးလေ့ရှိသည်။ မကြာခဏ ဆိုသလိုပင် ရေခဲများ မရှိသော အခါ၌ သိုမှီးထားသော အဆီပြင်များပေါ်တွင် မှီ၍ အသက်ရှင် နေထိုင်လေ့ ရှိကြသည်။
ပိုလာဝက်ဝံများသည် ဧပြီလ သို့မဟုတ် မေလအတွင်းတွင် မိတ်ဖက်မျိုးပွားခြင်းကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ထို့နောက် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဝက်ဝံမများ ဆောင်းခိုချိန်၌ သားဖွားကြသည်။ သားပေါက်ကလေးများသည်၎င်းမိခင်နှင့်အတူ မတ်လတိုင်သည်အထိ နေထိုင်ပြီးနောက် အပြင်သို့ ထွက်ကြသည်။ ၎င်းသားပေါက်ကလေးများသည် ဆောင်းခိုပြီးနောက် အစားအစာများကို ချက်ခြင်းစားသောက်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော် ကမ္ဘာ့ကြီးပူနွေးလာမှုသည် ယင်းသားပေါက်လေးများအား စားသောက်ခွင့်မရအောင် ပြုလုပ်နေပြီး အသက်ရှင်ရန်အခွင့်အရေးမတိုင်မီကပင် သေဆုံးနေကြရသည်။ သားပေါက်ကလေးများသည် မိခင်နှင့်အတူ ၂ နှစ်သားမှ ၃ နှစ်သားအထိ အတူနေထိုင်ကြပြီးနောက် ခွဲခွာသွားတတ်ကြသည်။
ပိုလာဝက်ဝံ၏ အသည်းတွင် ဗီတာမင် အေ ဓာတ် မြောက်များစွာပါဝင်သဖြင့် ယင်းအသည်းကို အလွန့်အကျွံစားသုံးမိသူသည် ကိုယ်ခန္ဓာကထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် သေရလေသည်။ ၎င်းအသည်းသည် အဆိပ်နှင့်တူလေသည်။
↑ "Late Pleistocene fossil find in Svalbard: the oldest remains ofapolar bear (Ursus maritimus Phipps, 1744) ever discovered" (2009). Polar Research 28 (3). doi:10.3402/polar.v28i3.6131. Archived9October 2016 at the Wayback Machine.
↑ Basic Facts About Polar Bears (24 February 2012)။
↑ Polar bear, (Ursus maritimus)။ United States Fish and Wildlife service။ 11 July 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Appearance. The polar bear is the largest member of the bear family, with the exception of Alaska's Kodiak bears, which equal polar bears in size.”
↑ Kindersley၊ Dorling (2001)။ Animal။ New York City: DK Publishing။ ISBN 978-0-7894-7764-4။
↑ Gunderson၊ Aren (2007)။ Ursus Maritimus။ University of Michigan Museum of Zoology။
↑ Stirling၊ Ian; Guravich၊ Dan (1998)။ Polar Bears။ University of Michigan Press။ p. 191။ ISBN 978-0-472-08108-0။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံ&oldid=728101" မှ ရယူရန်
ဥရောပတိုက်တွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။